Onjam-peom-piarahamonina ho an’izao tontolo izao avy ao Amazonia Ekoadaoreana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2019 4:18 GMT
Vaovao farany momba ny nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices
Mpandray anjara amin'ny tetikasa “Shuar, Achuar, Kichwa: Ny tantaranay amin'ny tranonkala amin'ny fiteninay.” Sary avy amin'i Wambra Radio.
Nosoratan'i Roberto Chávez, Wambra Radio
Natao tao an-tanànan'i Macas, ao amin'ny faritanin'i Ekoadaoro ao Santiago Morona izay tafiditra amin'ny tetikasa ” Shuar, Achuar, Kichwa: Ny tantaranay, ny fiteninay ao amin'ny Aterineto” tamin'ny 21-22 Novambra 2014 ny atrikasa fampiofanana faharoa momba ny fananganana tranonkala ho an'ny radiom-paritra ao amin'ny faritra atsimo-afovoan'i Amazôna ao Ekoadaoro.
Notanterahina tao amin'ny foiben'ny Radio Voices ao amin'ny NAE an'ny Vahoaka Achuar ao Ekoadaoro, nandray anjara avokoa ireo tompon'andraikitry ny fifandraisana sy ny tompon'andraikitry ny fifandraisana amin'ny vahoaka avy ao amin'ny median'ny fiarahamonina avy amin'ny Shuar, Achuar, ary Kichwa Amazoniana. Ny tanjon'ny atrikasa dia ny hanome fitaovana maimaim-poana, hampiditra votoaty ary hanangana tranonkala amin'ny fomba fandraisana anjara ho an'ny tetikasa median-dry zareo tsirairay avy.
Nanome tsikaritra anaty momba ny filàna fampahalalam-baovao sy ny teknolojiam-pifandraisana ho an'ny vahoaka indizeny sy ny zom-pirenena maro ity atrikasa ity ary koa ny fomba ahafahan'izy ireo manampy ao amin'ny asan'ny onjam-peon'ny fiarahamonina iasan-dry zareo, manamafy ny fanandrata-teny sy ny fifandraisana ara-piarahamonina.
Nanoratra lahatsoratra bilaogy mizara ny traikefan'izy ireo tao amin'ny atrikasa ny radio tsirairay. Azo jerena ao amin'ny tranonkalan'izy ireo izany lahatsoratra izany:
Ny Zoma 21 Novambra 2014, nanomboka tamin'ny 10 ora maraina tao amin'ny foiben'ny Radio NAE tao an-tanànan'i Macas, notarihin'ireo mpampiofana ao amin'ny vondrona Churo ny fampiofanana ireo mpanao gazetim-piarahamonina avy amin'ny onjam-peon'ny fiarahamonina ao Morona Santiago: Radio Arutam, Cascada ary NAE.
Manantena izahay fa ho fahombiazana ity atrikasa ity mba hanatsarana ny kalitaon'ny fampahalalam-baovao sy hanohizana ny famoahana votoaty manan-danja sy tompon'andraikitra, ary hanomezana vaovao momba ny hetsika avy eny ifotony mba hizarana izany amin'ny firenena sy izao tontolo izao.
Androany Zoma 21 novambra 2014, manomboka amin'ny fananganana tranonkala ho an'ny onjam-peom-piarahamonina ny atrikasa fanofanana, miaraka amin'ny fandraisan'ny Voz de Arutam, Voz de las Cascadas, Jatari Kichwa ary Voz de La NAE anjara, miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika avy amin'ny fifandraisana Churo eto ao amin'ny toeran'ny onjam-peontsika.
Nandritra ity hetsika ity, naneho ny heviny ireo mpandray anjara fa hanamafy orina antsika hanaparitaka ny dingan'ny tolona ataon'ny fikambanantsika, ny kolotsaintsika, ny mozika, ny zavakanto, ny fahendrena avy amin'ny razambe, ny hira, tantara, angano, arirarira, sns ny fananana ny tranonkalantsika manokana ho an'ny fampielezam-peo tsirairay sns …
Ankoatra izay dia samy nanolotra ny ahiahiny sy nizara ny traikefany ny tompon'andrakitry ny fifandraisana amin'ny onjam-peom-piarahamonina tsirairay avy. Manamafy antsika izany fiarahamiasa izany ary mandrisika antsika hanohy hanangana tambajotran'ny mediam-piarahamonina ao Ekoadaoro.
Nanangona ireo tompon'andraikitry ny fifandraisana avy ao amin'ny Radio Arutam mba hanatrika ny atrikasa fampiofanana momba ny “Fananganana tranonkala ho an'ny radio antserasera” ny lehiben'ny Federasiona Iraisam-paritry ny Foibe Shuar, Atoa. Florencio Tupikia. Nanomboka tamin'ny 10.45 maraina tao amin'ny foiben'ny Radio Voz de la NAE izany atrikasa izany. Nandray ny mpandray anjara rehetra tamin'ity hetsika ity i Roberto Chavez, mpitarika ny atrikasa ary nilaza fa faly izy tamin'ny taham-pandraisan'anjara avy amin'ny vondrom-piarahamonina ary nanamafy fa ny hanatsara ny fampiasana sy ny fitantanana ny onjam-peo antserasera araka ny tokony ho izy ny fanoloran-tena sy ny vina.
Toy izany koa, nanambara ny fandaharam-potoana ny mpitarika ny atrikasa, mamarana tamin'ny famantarana ny maha-zava-dehibe ny fananana tranonkala ho an'ny radiom-piarahamonina. Ho famaranana, nizarazara ho vondron'asa miaraka amin'ny mpikambana hafa ireo mpandray anjara.
Ity sehatra fampiofanana ity dia nahafahan'ny tompon'andraikitry ny fifandraisana ara-piarahamonina avy amin'ny onjam-peo Amazoniana mba hanaisotra ny fomba fihevitra fa natao ho an'izay mahavidy azy ihany ireo teknolojia vaovao ireo, amin'ny fanomezana safidy hafa amin'ny alalan'ny fitaovana aterineto maimaim-poana.
Taorian'ny atrikasa, dia hanohy ny fanavaozana ny tranonkalany miaraka amin'ny fampahalalam-baovao, vaovao ary famokarana radio ny onjam-peo tsirairay avy, izay nahafahan'ny onjam-peon'ny fiarahamonina rehetra avy any Amazonia Atsimo-Afovoany ao Ekoadaoro ho re any ivelan'ny kaominina misy azy.